I-china i-Aluminium-hand woven (AV-T78) abakhiqizi nabaphakeli | Aviva
I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T78)
4.Hand-ephothiwe Rope Chair (Olefin Usayizi 15mm)
Izinzuzo zokukhetha ifenisha eyenziwe ngentambo ephothiwe
Ifenisha eyenziwe ngentambo ephothiwe ingaba yinto enhle kakhulu kubantu abafuna izinto abangazishiya ngaphandle unyaka wonke. Lokho kungenxa yokuthi intambo ephothiwe imelana kakhulu nazo zonke izinhlobo zezulu kubandakanya imimoya enamandla nemvula.
Enye inzuzo yefenisha yezintambo ephothiwe ngokwesimo sezulu ukuthi ayipheli kalula lapho ivezwa elangeni. Okuqukethwe kuqukethe i-polypropylene enikeza ukuvikelwa kwemvelo ekushoneni kwelanga kanye namandla angeziwe. Abanini bemizi bangashiya ifenisha yangaphandle epheyini kuzo zonke izinkathi ezine zonyaka uma befisa ngaphandle kokukhathazeka ngokulimala kwesimo sezulu. Vele, kuhlale kungumqondo omuhle ukuvikela noma ukumboza ifenisha lapho ulindele izimo zezulu ezinzima.
Sicabanga ngokubeka izihlalo zethu zezintambo ezilukiwe cishe yonke indawo. Isihlalo ngasinye senziwa ngohlaka lwe-aluminium, futhi sinezingalo ezimbili ezelukiweyo zokubukeka komoya okusiza nokukugcina upholile lapho isimo sezulu sifudumala. Lezi zihlalo zifika zihlangene kancane, ukuze ukwazi ukusetha futhi ujabulele isimo sezulu esifudumele ngokushesha.
IFENISHA ELIDUMILE LOKULAWULA INDLELA
Intambo elukiwe inika ukubukeka okuthambe kakhulu kunezinye izinhlobo zempahla yefenisha njengensimbi noma i-aluminium. Lokhu kungenza i-patio noma enye indawo engaphandle ibonakale yamukela izivakashi. Ukwengeza ingubo encane noma ukuphonsa umcamelo kwenza kubukeke kumema njengefenisha yasendlini futhi kufanele kwenze izivakashi zizizwe zisekhaya. Izihlalo ezintsha zePalisades (ezifanekiselwe ngezansi) zikhombisa ukuthi impahla yentambo ephothiwe ingacwebezelwa ngokweqile futhi ithokomele kanjani.
Langaphambilini I-Aluminium yesandla eselukiwe (AV-T76)
Olandelayo: Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T103)
Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T10)
Isethi ye-Bistro ephothiwe nge-Aluminium (AV-T23)